UNgcolosi uvule isigcawu uthi iBhayibheli labekelwa ukugqilaza aboHlanga - Bayede News
UNgcolosi uvule isigcawu uthi iBhayibheli labekelwa ukugqilaza aboHlanga
Kwakufanele kutshalwe izihlahla emalokishini aseThekwini
Bathi uNgcolosi uyihlabe esikhonkosini
Uqinisile libe nomthelela omubi kakhulu kusikompilo lomuntu. Ukukuqonda lokhu kudinga ukuba ujule kakhulu. Lisetshenziswe njengenkoleloze. Angisho ukuthi okuphakathi kuyize kodwa lisetshenziselwe ukususa izikhonkwane zesintu sethu. Isibonelo, ngaphambi kokuba ululeke kumele ucaphune ivesi thizeni, uma njalo ungakwenzile lokhu inkulumo ayibi nasigqi kwabakulalele. Umthandazo kumele uphethe “ngegama likaJesu” engazuthi awuphelele uma lo musho ungekho, kuningi. Uma kungadeda lona kuningi okungalunga, imibuzo eminingi ngobunjalo bethu ingaphenduleka. – nguSibusiso G Ngema
Uma uqonda kabanzi ngomlando kaConstantine kanye nomndeni ka-Alexander noJulius Ceaser kungaba lula ukuvumelana noBhengu ngokuthi iBhayibheli lahlanganiswa yila madoda kanye nesigungu sezihlakaniphi nabefundisi bekhethelo ngobukhulu ubuhlakani ukulenza isikhali esikhulu ukufaka umbuso waseRome ukuba ugogoshe amandla ezinye izizwe ngokungena ngenkolo yobuKhrestu equkethe uJesu omhlophe noJehovah okungoNkulunkulu besizwe. Kodwa-ke ngeke kwamukeleka kuthina bantu benkolo yobuKhrestu ngoba sesafunzwa sahlafuna saze sayigwinya le nkolo isiguduza emthanjeni yegazi. Manje ukwambula amaqiniso ugcina usubizwa ngomphiki Khrestu ngoba ukuthola iqiniso usumdala kuyakuphazamisa nasenqondweni. – nguMjoli Lalelani
Into efike izwise ubuhlungu kakhulu ukuthi kwale nkolo eyafika nabamhlophe kanye neBhayibheli futhi yibo kanye abamhlophe abanenzondo embi abayibhekise esizweni esimnyama kodwa futhi yibo abasitshela ngoJesu nokuya ezulwini ekubeni bona abakwenzi konke lokho okuyisana ezulwini. Kodwa bafuna thina futhi sikholwe, kubuhlungu ukuba mnyama emhlabeni ngoba futhi asifuni nokubona noma izinto sezibonakala. – nguThabiso Mtshali
IBhayibheli safunzwa lona abelungu ukuze silunge benza noJesu waba umlungu ukuze sizobahlonipha ngoba befuna ukusigqilaza bathathe konke okuyigugu kithi. Namanje nje wena uyaqhela uma nizohlangana nomlungu kodwa yena akaqheli ngisho ingane yabo. Ethendeni kubantu abali-100 nomlungu oyedwa uthola sekukhulunywa ulimu lwesiNgisi yini njalo amandla eBhaybheli elinoJesu ofana nabo.– nguBheki Sibiya Bzt
Bathi uyaphambuka uNgcolosi
Kodwa manje umbuzo uzothi ngabe laba abafika neBhayibheli ukuzocindezela aboMdabu bona abalisebenzisi yini lapha okanye emazweni abo? Uma ungaya e-England, eFrance, eGermany njalonjalo ngabe ngeke ulifice yini iBhayibheli khona? Okunye uma likhona ngaphandle nje kokuthi kuhluke ulimi elibhalwe ngalo ngabe lihlukile yini kunaleli elifundwa lapha? Uma kuwukuthi likhona futhi liyefana naleli elifundwa lapha lokho kosho ukuthi lowo mbono wakhe awuzwakali kahle. – nguMbuso Euclid
UMgungundlovu ubukeka ukhula ngesibalo sabanokhuvethe
Bekungakuhle uma uNgcolosi esho lokho esebenzisa uphenyo aselwenzile lwafakazela lokhu akushoyo. Ngisho ngoba ngakolunye uhlangothi bukhona ubufakazi bezinqola zamasosha kaFaro ezasala phakathi olwandle mhla uMose ekhipha abantwana bakwa-Israel e-Egypt, angena nawo ethi ayabajaha ngoba ulwandle lusavulekile, athi esephakathi wonke sebephumile ababezokhishwa, washaya ulwandle ngenduku uMose lwabagqiba bonke laba abebelandela bafa zasala izinqola. Usuwatholakala nomkhumbi okukholakala ukuthi iwona lo owawakhiwe uNoah yize ngikhohlwa igama lentaba owatholakala kuyo. Ngale kwalokho mina ngibuka uBhengu kunguye ozigqilaza ngokuzincisha ulwazi. – nguMzarh Mzabalazo Mshingila
Sigqilazwe ipolitiki thina hhayi iBhayibheli musa ukwedukisa abantu, ubasabelani osopolitiki? Njengoba izingane zaboHlanga ziquve emakhaya zixoshiwe emanyuvesi ngenxa yokushoda ngemali ekubeni abazali bethu abasebenzi, ikusasa lomuntu omnyama liphi-ke lapho? Musani ukuhambe nihlaziya umbhedo niyeke yona nto egqilaza aboHlanga ngoba nakhu nizicela nkobe zosopolitiki. – nguDjthamza Mkhabela
Noma iBhayibheli lingabukeka njengesitha kodwa iqiniso kwasemandulo okhokho babemdumisa uMvelinqangi ngoba akukho lapho kulunge khona ukweba, ukubulala nokulimaza omunye umuntu ngokomoya kodwa icebo likaMdali ngomuntu ubunye nokunakekelana ngoba nomlando wesintu uyasicacisela ukuthi abantu babethekelana babuye basiselane okwakuyindlela yokwenza okulungileyo egameni likaMvelinqangi. Uma iBhayibheli lisiyalela ukuthi senze okuhle kwabanye kungani libhekwa ukuthi lafika kanjani kwelengabade? – nguS’pharman Misoh Msimango
Bayede News Mar 12, 2021